Honor 6X, fiheverana voalohany ao amin'ny MWC 2017 | Androidsis
Alfonso ny voankazo | | Huawei, MWC
Izahay dia nanakaiky ny toeran'ny Honor ao anatin'ny MWC 2017 mba hitsapana ny Honor 6X, ny terminal farany natolotry ny marika ary izany dia nahatonga anay hanana fahatsapana tena tsara. Raha tsy misy fifanarahana fanampiny dia avelanay hanana ny fahatsapana horonantsary voalohany amin'ity smartphone ity ianao.
2 Manaja famaritana 6X
Ao amin'ny sehatry ny famolavolana dia miatrika telefaona voaorina tsara isika. Ary, na eo aza ny vidiny tery, ny Honor 6X dia manana vatana vita amin'ny aliminioma izay manome ny telefaona fijery tena premium.
Ny fahatsapana rehefa mitazona tsara ny telefaona. Mipetraka tsara eo am-pelatanana ny telefaona, manome fahatsapana tsara ary mampiseho fa ny smartphone dia mety hisy famaranana tsara na eo aza ny vidiny mirary.
Raha vao jerena dia mazava fa ny Honor 6X dia mitazona ny tsipika famolavolana ireo terminal Huawei rehetra. Amin'izany no ahitantsika ny lakilen'ny fanaraha-maso sy ny / eo amin'ny terminal eo ankavanana.
Ireo bokotra ireo dia tsy mihoatra ny dia marina sy ny fanoherana ny tsindry. Eo amin'ny ilany havia no misy ny slot micro SD card ary ny karatra SIM nano, raha eo amin'ny farany ambany no ahitantsika ny fivoahan'ny feo sy ny seranan-tsambo fampiasan'ny fitaovana.
Raha fintinina, ny telefaona voaorina tsara izay tsy misy fanaratoana lehibe dia mahavita miavaka amin'ireo mpifaninana aminy amin'ireo famaranana premium ireo sy izay matanjaka Efijery 5.5 inch izay manasa anao hankafy ny atiny multimedia
Manaja famaritana 6X
5,5 "(1080 x 1920) efijery IPS fitaratra miolaka HD 2.5D feno
Octa-core Kirin 655 puce (4 x 2.1 GHz + 4 x 1.7 GHz) 16 nm
RAM 3GB / 4GB misy fitehirizana 32G, ondrilahy 4GB misy fahatsiarovana anatiny 64GB. Ireo karazany roa azo atsangana amin'ny micro SD hatramin'ny 128GB
Android 6.0 Marshmallow miaraka amin'ny EMUI 4.1
Fakan-tsary 12 MP aoriana misy flash LED, lens 6P, habe pixel 1,25um, fakan-tsary PDAF ary 2MP faharoa
Refy: 150,9 x 72,6 x 8,2mm
Milanja: 162 grama
Batterie 3.340 mAh miaraka amina tohana haingana
Ary io no iray amin'ireo teboka manintona indrindra an'ity Honor 6X ity dia tonga ao amin'ny faritra amin'ny efijery. Ny telefaona dia misy mihoatra ny ampy fitaovana mba hahafahanao mamindra izay lalao na fampiharana tsy misy lehibe olana, indrindra ny maodely misy RAM 4 GB, ary ny haben'ny tontolony eo aloha dia manasa anao hankafy ny atiny multimedia na lalao video.
Ho an'ity, nisafidy ny mpanamboatra a 5.5 efijery IPS mahatratra ny 1080p vahaolana. Ity takelaka ity dia manolotra loko tena mazava sy maranitra, miaraka amin'ny ambaratonga famirapiratana tonga lafatra ary mihoatra ny zoro fijerena marina, izay mahatonga an'io Honor 6X io ho safidy manintona raha mitady telefaona misy efijery lehibe tsy latsaky ny 300 euro ianao.
Ary koa ny Honor 6X dia manana sensor momba ny dian-tànana hita any aoriana. Tsy afaka nanandrana ity sensor biometrika ity tamin'ny fijoroana Huawei aho fa rehefa nahita ny fahombiazan'ny mpamaky ny dian-tànana amin'ny fitaovan'ny marika rehetra, dia azo inoana fa miasa toy ny landy ny sensor an'ny dian-tànana an'ity Honor 6X ity.
Ary tsy afaka manadino momba ny Fakan-tsary 6X. Na koa, ny rafitra roa izay ahafahantsika maka sary andian-tsary misy vokany ivelan'ny fifantohana, na bokeh, izay hahafaly ireo tia sary. Na ny maody an-tanana izay samy manana ny maody fakan-tsary sy ilay mavitrika video amin'ny Honor 6X ary ahafahantsika mikasika ny masontsivana rehetra ao anaty fakan-tsary matihanina, toy ny fifandanjana fotsy na ny halaliny.
Fitaovana iray izay namela ahy fahatsapana tena tsara taorian'ny fitsapana azy tao amin'ny MWC. Ankehitriny dia tsy maintsy miandry an'i Honor isika handefa antsika andrana fitsapana hahafahana manao fanadihadiana lalindalina kokoa momba ity finday avo lenta Android midadasika ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei » Manaja 6X, fahatsapana voalohany